साइबर चौतारी: लक्ष्मी बैङ्कको ईन्टरनेट ब्याङ्किङ्ग
लक्ष्मी बैङ्कको ईन्टरनेट ब्याङ्किङ्ग
लक्ष्मी बैङ्कको ब्रान्चहरुको ईन्टेरियर डिजाईन अझ भनौ समग्र बैककै ब्रान्डीङ्ग राम्रै सँग भएको मान्न सकिन्छ । यस बैङ्कको वेबसाईटको कुरा गर्ने हो भने चाही यसको साईट जती राम्रो छ यसको ईन्टरनेट ब्याङ्किङ्गको डिजाईनिङ्ग त्यती नै नराम्रो देखिन्छ । ईन्टरनेट बैङ्किङ्गको सर्भर बेला न कुबेला डाउन हुने, बेव साईटमा अनावस्यक प्रोग्रामिङ्ग ईरर देखिने समस्याहरु छन । युजर ईन्सट्रक्सन राम्रोसँग दिइएको छैन । डिजाईनरले ईन्टरनेट ब्याङ्किगको ईन्टरफेसमा गतिलो सँग कम्तीमा ब्याकग्राउण्ड कलर त फोरग्राउण्ड कलर छुटिने गरी एउटा स्टाईल सिट सम्म बनाउन चाहेको देखिदैन ।
यस बैङ्कको ईन्टरनेट ब्याकिङ्गमा सबभन्दा नराम्रो कुरा भनेकै यसको पासवर्ड पोलिसी हो । पासवर्ड कम्तीमा ६ र बढीमा १२ अक्षरको हुनु पर्छ । युजर आई डी सग सम्बन्धित पासवर्ड हुनु हुदैन । पासवर्डमा कम्तिमा २ वटा क्यापिटल २ वटा स्मल लेटर र २ नम्बर हुनै पर्छ । त्यसमा पनि दुरुस्त मिल्ने क्यारेक्टर २ भन्दा बढी हुनु हुदैन। हे भगवान ! पासवर्ड पनि सम्झनै नसकिने गरीको यति धेरै कम्प्लीकेटेड हुन्छ ? । मैले नबुझेको कुरा चाही लेखेरै राख्न पर्ने गरीको लगईन ईन्फर्मेशन भरपर्दो हुन्छ र ? त्यती मात्र कहा हो र दुई पटक भन्दा बढी पटक गलत पासवर्ड हानेमा अकाऊन्ट नै सस्पेण्ड हुने । मेरो अनुमानमा यसको ईन्टरनेट ब्याङ्गकिङ्ग युजरहरुमा मेजोरिटीहरुको अकाउण्ट कम्तिमा एक पटक सस्पेण्ड भा कै होला।
यदी तपाईले Fund Transfer मा क्लिक गर्नु भो भने Error Description भन्ने म्याकेज आउछ । यो भनेको के हो ? कहि त लेखी दिनु पर्ने हो । अझ रमाईलो कुरा त ब्याङ्कको लोगो माथी तिर html ट्याग सम्म राम्रो ओपनिङ्ग गरेको छैन ।
यो ईन्टरनेट ब्याङ्गकिङ्ग बाहेक चाही बेव साईट राम्रो छ । ;-)
मलाई हरिलो डट कम मा पैसा पठाउन पर्यो भने मैले के रेफरेन्स दिनु पर्ने हो र हरिलो ले मैले नै मेरो अकाउण्ट लाइ नै पैसा पठाई दिएको हो भनेर थाहा पाउछ ? मानि लिनुस मेरो अकाऊण्ट नम्बर र मेरो नेम नै रेफरेन्स नम्बर हो र त्यसैको आधारमा हरिलो मेरो पेमेण्ट ट्रान्सफर थाहा पाउछ । तर मैले मेरो साथिको हरिलो डट कमको अकाउण्टमा मेरो अकाउण्टवाट पैसा पठाउन लाग्या हो भने चाही नि कसरी थाहा पाउछ नि ?
बैङ्क अफ एसिया , स्टायाण्डर्ड चार्टर्ड बैक नेपा एस बि आई बैक र लक्ष्मी बैङ्कको ईन्टरनेट बैङ्किङ प्रयोगको मेरो अनुभबको आधारमा ईन्टरनेट बैङ्किङ्ग बैङ्क अफ एसिया को जति राम्रो अरुको छैन । (मैले बैङ्क अफ एसिया मा मेरो खाता बन्द गरी सके ) । लक्ष्मी बैक वाट ई सेवामा तुरुन्त पैसा पठाउन सकिन्छ यो चाही लक्ष्मी बैकको अरु बैङ्कको ईन्टरनेट बैङ्किगमा नभएको " गतिलो " सुबिधा हो ।
Sa Roz Thursday, March 17, 2011 at 3:22:00 PM GMT+5:45
म पनि बैंक अफ एसिया को iTouch Banking प्रयोग गर्छु, वास्तव मै यो राम्रो र भर पर्दो छ । जहाँ सम्माeSewa को कुरा छ, बैंक अफ एसिया को iTouch Banking बाट पनि गर्न सकिन्छ ।
Unknown Monday, March 21, 2011 at 3:14:00 PM GMT+5:45
BOA bata pani eSewa ma paisa pathauna milchha ni. Aru bank pani esewa ma connected chha jastai Global bank, kumari bank, TDBL, NCC, etc.